အမေးအဖြေများ - ဘေဂျင်း ပြော. နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
SPMK700 ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအား gauge
SPMK 51X စီးရီး Process ကိုစံကိုက်ညှိ
SDP Intelligent ဖိအား Module
Adapter က 38 PCs ၏ SPMK2000-1 set ကို
SPMK2000-2 ဓါတ်ငွေ့ Connect ကိုပိုက်
သတင်း & ပြပွဲ
တူရိယာစံကိုက်ညှိတူရိယာတိကျမှန်ကန်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုတဲ့မူလတန်းကျောင်းဖြစ်စဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ စံကိုက်ညှိကာလက်ခံနိုင်ဖွယ်အကွာအဝေးအတွင်းတစ်နမူနာများအတွက်ရလဒ်များကိုတစ်ဦးတူရိယာ configuring ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိတိုင်းတာစေအချက်များဖျက်သိမ်းရေးသို့မဟုတ်အသေးအဖွဲကိရိယာဒီဇိုင်းအခြေခံလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင် users.We မှအရည်အသွေးမြင့်ဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုစံကိုက်ညှိသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင် 17 နှစ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုစံကိုက်ညှိတူရိယာ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကြိုတင် 100% TT ၏ငွေပေးချေမှုလက်ခံပါ။
အကျိုးခံစားရဲ့အမည်: ဘေဂျင်း ပြော. နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
အကျိုးခံစားရဲ့ဘဏ်: တရုတ်ဘေဂျင်း Qinghe မြို့ Sub-ဌာနခွဲစက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်
SWIFT ကုတ်: ICBKCNBJBJM
သငျသညျစံကိုက်ညှိ instument သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား
ဘေဂျင်း ပြော. နည်းပညာ Co. , Ltd မှဖိအားတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး China.We အတွက်အပူချိန်စံကိုက်ညှိတူရိယာ 33,8 သန်းယွမ်တစ် registerd မြို့တော်နှင့်အတူ 1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။
သငျသညျဘေဂျင်းအတိုင်းအတာများနှင့်စံကိုက်ညှိ Institute မှအဖြစ် 3rd ပါတီအနေဖြင့်စံကိုက်ညှိလက်မှတ်များလိုအပ်ခဲ့လျှင်, USD130.0 တစ်ခုအပိုကုန်ကျစရိတ်ရှိရလိမ့်မည်။
SPMK700 ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအား gauge, သင် 1000bar ထက်ပိုမိုများအတွက် 0.05% FS တိကျမှန်ကန်မှုကိုပေးနိုငျသနညျး
1000bar သို့မဟုတ်အထက်၏ဖိအားအကွာအဝေး, ကြှနျုပျတို့ max ကိုအဖြစ် 0.1% တိကျမှန်ကန်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။
သငျသညျ 1000bar နှင့်အထက်များအတွက် 0.05% FS သို့မဟုတ်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုလိုအပ်လျှင်, စျေးနှုန်း USD6500.0.Because ထက်ပိုပါလိမ့်မည်ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ၏ပစ္စည်းကိုကျနော်တို့သုံးနေသည့်ပစ္စည်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာ, အလွန်အဘိုးထိုက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမပေးသွင်းထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်စျေးနှုန်းမှာ 1000bar မှာသို့မဟုတ်အထက် 0.05% FS ပေးနိုင်ပါသည်။
1000bar ထက်အကွာအဝေးလျော့နည်းအများဆုံးဖိအားအဘို့, ငါတို့သည်လည်း 0,025% FS, 0.05% FS ပေးနိုင်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ပြီးတော့စျေးကိုကိုးကား, သင်လိုအပ်ဖိအားအကွာအဝေးနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပေးပေးပါ။